Google na-ekwu na AI ya dị ngwa karịa mgbawa imewe | Site na Linux
Ọchịchịrị | 11/06/2021 12:03 | Emelitere ka 11/06/2021 21:36 | Noticias
Google na-ekwu na o mepụtara a software nke ọgụgụ isi nke nwere ike ịmepụta kọmputa ngwa ngwa karịa ụmụ mmadụ. Na edemede bipụtara ụbọchị ole na ole gara aga, Google na-ekwu na mgbawa nke ga-ewe ụmụ mmadụ ọnwa iji chepụta nwere ike iche n'echiche AI ​​ọhụrụ ya na-erughị awa isii.
Amamịghe echiche ejirilarịrị iji mepụta ite ọhụrụ nke ibe Ngalaba Ngwọta Tensioner (TPU) nke Google, nke a na-eji arụ ọrụ metụtara ọgụgụ isi, Google kwuru. Ndị injinia Google kwuru na ọganihu nwere ike inwe "isi ihe" maka ụlọ ọrụ semiconductor.
N'ụzọ bụ isi, ọ bụ maka ịchọpụta ebe etinyebere ihe dị ka CPU na GPU na ebe nchekwa megide ibe ha na mgbawa. Ọnọdụ ha na obere mbadamba ndị a dị mkpa n'ihi na ọ na-emetụta ike ike na ọsọ ọsọ nke mgbawa; wiwi na ngagharị mgbaàmà achọrọ iji jikọọ ihe niile dị ezigbo mkpa.
Ndị injinia Google Azalia Mirhoseini na Anna Goldie, ya na ndị ọrụ ibe ha, kọwara na mbipụta ha usoro mmụta mmụba miri emi nwere ike ịmepụta "usoro nhazi" n'ihe na-erughị awa isii, ebe ụfọdụ na-ewe ọnwa.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Google na-eji ọgụgụ isi emebe mkpụrụ osisi enwere ike iji mepụta usoro ọgụgụ isi siri ike karịa.
Usoro ndị yiri ya nwekwara ike ịkụ mmadụ na egwuregwu dị mgbagwoju anya dị ka ịga na cheesi. Na ndị a ndapụta, algọridim na-azụ ịkwaga iberibe na dịkwuo gị Ohere inweta nke na-emeri egwuregwu, ma na tile dịruru ná njọ, ndị AI na-azụ iji chọta ndị kasị mma Nchikota mmiri ka ọ dị ka oru oma dị ka o kwere na egwuregwu.
Netwọ akwara na-ejikwa ụfọdụ usoro nke ndị ụlọ ọrụ semiconductor tụlere na mbụ, mana a hapụrụ dị ka njedebe nwụrụ anwụ. Dabere na edemede ahụ, usoro ọgụgụ isi siri nweta 10.000 blueprints maka ibe iji "mụta" ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ.
"Ejirila usoro anyị mepụta ọgbọ na-esote nke ngwa ngwa Google nke AI ma nwee ike ịchekwa ọtụtụ puku awa nke mbọ mmadụ maka ọgbọ ọhụụ ọ bụla," ndị injinia dere. "N'ikpeazụ, anyị kwenyere na ngwaike nke AI nwere ike dị ike ga-eme ka ọganihu nke AI pụta, na -emepụta mmekọrịta mmekọrịta n'etiti mpaghara abụọ ahụ."
Dị ka isiokwu ahụ si kwuo, mgbe ị na-emepụta microprocessor ma ọ bụ onye na-ebuwanye ibu ọrụ, ọ na-adịkarị mkpa ịkọwapụta otu usoro ya si arụ ọrụ n'asụsụ dị elu, dị ka VHDL, SystemVerilog, ma ọ bụ ma eleghị anya Chisel.
Usoro a ga - emecha sụgharịa ihe a na - akpọ netlist, nke na - akọwa otu setịpụrụ nke macroblocks na sel ndị toro eto ga - ejikọ site na wires iji rụọ ọrụ nke mgbawa.
Mkpụrụ ndụ ndị nwere ihe ndị dị mkpa dị ka NAND na ọnụ ụzọ mgbagha NOR, ebe macroblocks nwere usoro nke mkpụrụ ndụ ọkọlọtọ ma ọ bụ ihe elektrọniks ndị ọzọ ezubere ịrụ ọrụ pụrụ iche, dị ka ịnye ebe nchekwa ma ọ bụ ihe nhazi. Ya mere, nnukwu macroblocks buru ibu karịa sel ndị ọkọlọtọ.
Mgbe ahụ ị ga-ahọrọ otu esi ahazi ndepụta nke sel na macroblocks na mgbawa. Dabere na ndị ọrụ Google, ọ nwere ike were ndị injinia mmadụ izu ma ọ bụ ọnwa iji rụọ ọrụ na ngwa ọrụ mgbawa pụrụ iche ma wepụta ọtụtụ oge iji nweta atụmatụ kachasị dabere na mkpa maka ike oriri, oge, ọsọ, wdg.
Ihe na-emekarị na usoro a bụ na a ga-agbanwe ọnọdụ nke nnukwu macroblocks ka atụmatụ ahụ na-amalite. Ma mgbe ahụ ị ga-ahapụrịrị ngwa ọrụ akpaghị aka, nke na-eji algọridim na-enweghị ọgụgụ isi, tụba n'ọtụtụ mkpụrụ ndụ dị obere, wee hichaa ma megharịa ruo mgbe ịmechara, doc ahụ na-ekwu.
Iji mee ka usoro ihe a na-eme ngwa ngwa, ndị ọkachamara na ọgụgụ isi nke Google mepụtara usoro ntanetị nke na-arụ ọrụ macro na-etinye onwe ya n'ime awa ole na ole iji mezuo ezigbo ihe.
A na-etinyezi mkpụrụ ndụ ọkọlọtọ na ohere efu site na ngwanrọ ndị ọzọ, dị ka isiokwu ahụ si kwuo. Nke a igwe mmụta usoro kwesiri inwe ike iweputa ihe ngosi di nma karie uzo ndi injinia mmadu n'iji akụrụngwa akpaaka na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ Google kọwara na edemede ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Google na-ekwu na AI ya na-agba ọsọ ọsọ